MASTER GABOOYAW AMA YEEL SIDAN AMA ISKA AAMUS | Toggaherer's Blog
« FAALO:- SHEEKH SHARIIF MA WAXA UU U HOGAANSAMAY HANJABAADII FAROOLE MISE ……?
DOODA UU FURAY BARKHAD XAAJI MR GABOOYE EE MAXAA LA II QUUDHSADAY »
MASTER GABOOYAW AMA YEEL SIDAN AMA ISKA AAMUS
Mastar gabooye hal baan leeyahay. Waxaad ogaataa in dulmiga ilaa lagala hortago dhirbaaxo in aanu siyar isaga joogsanin waayo dulmiga hogaankiisu waa nin aan habeen iyo dharaar daalin oo layidhaah Iblays. Master gabooyaw talo ayaan ku siinayaaye ma taladaa qaadatay mise iska baal martay . Hadaad taladaa qaadato in uun baad rajo leeday , hadii kale wakhti badan hawshan ha iskaga lumin. Talidiina waa tan.
1. 100 hablood oo daarooda + 100 hablood oo hawiye ah + 100 hablood oo isaaqa
doon raggii kuu soo dhicilahaa. Oo salaadiinta iyo cuqaadha wasiirada ay u horeeyaan gabdhohoodu. Waxay noqon warkaasi nin jebiyay gidaar ka falasdiin lagu wareejiyay oo kale ama kii baarliinba. Hadaad kari waydo midkale ayaa kuu furan
2. Beel ka mida beelaha soomaaliyeed miduun weerar ku gala habeen ilaa 100 nin aad dhiiga dhegta u darto ha guri hoyanina. Gabayna u raacsha. Hadaad taa kari waydaan tan sameeya
3.Cuna qabatayn ku soo roga bulshada ilaa madaxwaynaha!
Shaqada timo xiirka, kabo tolida, iyo biro tumida faraha ka qaad oo joojiya. Dadka haku boxaan timihu , sharuubaa iyo gadhkuba ilaa madaxwaynaha, wasiirada, barlamaannada. Waa in nin waliba soo shaqo tagaa isagoo boofil leh ama quraarad ku soo xiirtay. Kab cid tosha ama cid yeesha hala waayo . Qofkay kabi ka go’do waa inuu kab cusub mooyee kab dambe soo yeelanin .Shanta qof ee aqal ka soo wada toosda hadii kabuhu ka go’aan waa in aabahooda faanka badani ciyaal ka kabo u waayaa oo kabo la aan suuqa la lugeeyaa. Middi iyo faash wax lagu qalo waa in lawaayaa si geel iyo lo’ dambe loo cunin hilibkooda . dheri wax lagu karsado waa in lawaayaa. Girgire dablagu shito waa in aan la arag, si dadku dhaxan iyo gaajo u wado bakhtiyo. Suuli aad qodaan yuu jirin iyo mid aad dhurtaantoona . Suuliyadu ha ka buuxsameen reeraha booyadda macdanta kkk gurta waa in berridaa dab qabdsiisaan. Xashiishka nin dambe oo gura hayeelanina . Waa in magaalada xashiishku istuulaa oo gudaafad ilaa bacadluhu noqdaa dadka lagu derdero. Waa in lawaayaa meel nadiifa oo salaadiinta iyo malaaqyadu ku shirto. Baalashle waa inla waayaa oo wasiir hebel isagoo kabo wada boodha xidhan waa inuu suuqa sabeeyaa. Dhalinyar kabo baalashaysan xidhan waa in lawaayaa. Nin waliba waa in uu maro yar jeebka ku qaataa ama baalashle isu noqdaa.
4. magaca bedela oo labaxa BAHO Dahawis ( da =daarood, haw = hawiye, is =isaaq)
ama magac kaleba waa idiin furan yahay. Laa kiin mid ogaada idaacada haka sii daynina hana u waqlalina si aan loo ogaan cida la baxday hadii kale sirtu waa fashil.
Intaaba hadii aadsan samaynay MIDNABA ninyahaw hadalku kaa dhab ma aha e iska aamus.
Bye: Cali Cawaale Cismaan
This entry was posted on February 21, 2009 at 8:40 am and is filed under Togaherer.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.